Uhlalutyo lwe-Starter Kit ukuya kwi-Arduino Super Starter Kit ye-UNO R3 ye-Elegoo-Ikkaro
yokuqalisa >> Arduino >> I-Starter Kit eya kwi-Arduino Super Starter Kit ye-UNO R3 ye-Elegoo
I-Starter Kit eya kwi-Arduino Super Starter Kit ye-UNO R3 ye-Elegoo
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlulileyo Ndithenge i-Arduino Starter Kit, kwi-brand Elegoo, Isibonelelo se- € 30. Ndinezivamvo ezimbalwa kunye nezinto endizithengileyo, kodwa bendilahlekile uninzi lwazo zinikezelwe kwiKit kwaye kubonakala ngathi licebo elihle ukuyithenga kwaye ubone ukuba olu hlobo lwemveliso luyifanele. Banazo iikiti ezi-4 zokuqalisa, esisiseko yiSuper Starter eyikiti endiyithengileyo emva koko ezimbini ezingaphezulu ezinamacandelo angaphezulu, kodwa inyani kukuba ndiyithathile le ngenxa yesithembiso. Kudala ndifuna ukuthatha enye eneradio frequency.
Ukufunda uphononongo lweebhodi ze-Elegoo bathetha kakuhle, kodwa kukho abantu abakhalaza ngokuhambelana kwebhodi eyilungu leArduino UNO R3. Amava am ebelungile, ipleyiti isebenze ngokugqibeleleyo, iyahambelana neArduino IDE ngaphandle kokwenza nantoni na, vele ufake iplagi kwaye udlale. Ndiyilayishe i bhanya, Ndenze uhlengahlengiso oluthile. Ndizamile ezinye izinto ngokukhawuleza kwaye yonke into isebenza kakuhle (kuvavanywa Ubuntu 16.10 kunye kubuntu 17.04)
Ndishiya ividiyo yohlobo lwe-unboxing endiyenzileyo ukuze ubone ibhokisi bukhoma, ukuba izisa ntoni kwaye ihlelwe njani.
Ndishiya ulwazi oluneenkcukacha apha ngezantsi.
Ekupheleni kwenqaku ndicacisa kuwe xa ndibona ezi ndidi zeekiti zinomdla.
Izixhobo, izixhobo kunye nezivamvo ezifakwe kwikhithi
Konke oku kuzisa. Ndifune, Ukuthambekisa inzwa, ii-ICs, imodyuli yamandla, kunye neLCD azisoze ziphosakale. Ukongeza kolunye ufakelo lokuba xa uneprojekthi enye, iyasilela.
Ibhodi ye-Elegoo UNO R1 ye-3 (Arduino UNO R3 clone)
1 LCD 1602
Ukwandiswa kwebhodi yesonka yokwenza prototyping
Imodyuli yamandla e-1
Umqhubi wenqwelo-mafutha o-stepper ULN1
Isithuthi esihamba ngenyawo esinye
1 SG90 servo yemoto
1 5V edlulisiweyo
Imodyuli yomamkeli eyi-infrared (IR)
1 Into yokudlala yolonwabo
1 ubushushu be-DHT11 kunye nesenzi sokufuma
1 HC-SR04 ye-Ultrasonic Sensor
1 DC 3-6 V iimoto kunye nefeni
I-2 esebenzayo kunye ne-Passive Buzzers 1 nganye
Isenzi woluvo (ibhola) okanye iswitshi
1 74HC595 irejista yokutshintsha
1 L293D isekethe edibeneyo yolawulo lweemoto
Iibhola ezingama-5, (amaqhosha)
Umboniso o-1 wenani eli-1 kunye nenxalenye engama-7
elinye icandelo le-4 elinesiqingatha se-7
Indawo ekude yeR IR
Ibhodi yesonka (Isonka)
Iintambo ezili-10 zeDupont eziBhinqileyo zaBasetyhini
Intambo yebhetri ye-1 9V ebhodini
1 9V ibhetri
Amachiza ayi-120 amaxabiso ahlukeneyo
I-25 yee-LED ezinemibala emihlanu
1 i-RGB ye-LED
2 oothixokazi abalungisa 1N4007
Abaguquleli be-12 NPN PN2222
I-CD enye (Nge-CD iza nekhowudi yesifundo ngasinye kunye neelayibrari. Ukongeza kwincwadi yemigaqo, nakwiSpanish, yesifundo ngasinye kunye neprojekthi abasebenza kuyo. Singayikhuphela kwiwebhusayithi yabo)
Uluhlu lweeprojekthi eziza kwenziwa neArduino abasinika zona kwizifundo zabo
I-brand isinika i-CD ngayo yonke ikhowudi, iilayibrari kunye nencwadana ye-Arduino. Kwincwadana esinokuyenza Khuphela simahla kwiwebhusayithi yabo (nangona singayithengi imveliso) yiza izikhombisi zokusetyenziswa kwecandelo leArduino, indlela yokuyixhuma, ukusebenzisa i-IDE, ukusombulula nayiphi na ingxaki yonxibelelwano, kunye ne-pc njl. Kwaye emva koko isifundisa ukuba sinxibelelane nabenzi boluvo abahlukeneyo ngezifundo. Isihloko ngasinye sisifundo kwaye inyani kukuba zichazwe kakuhle. Ukuba uqala ndicebisa ukuba uyikhuphele.
Izifundo ze-Arduino zezi zilandelayo:
Blink kwi-Elegoo Uno R3, iklasikhi ngokukhanyisa ukukhokelwa ebhodini
Ii-LED ziguqula ukukhanya kokukhokelwa kusetyenziswa izinto ezahlukeneyo zokuxhathisa
Ummiselo we-RGB we-LED ye-RGB ye-LED efana nokuba nee-3s ze-LED kwenye. Apha bachaza nokuba yintoni i-PWM
Amatikiti edijithali. Uyicima njani i-LED uyicime kwaye uyicime kunye nee-pushbuttons, okt ezivela kwigalelo langaphandle ledijithali
Yenza ibuzzer isebenze. Kancinci malunga ne-buzzers esebenzayo kunye ne-passive
Ukutshintsha kwebhola. Uyisebenzisa kanjani le nzwa ukukhangela utshintsho kutyekelo.
Isivamvo se-Ultrasound, kule meko yi-HC-SR04
Ubushushu be-DHT11 kunye nesenzi sokufuma
Imodyuli yomamkeli we-IR ukuze uqalise kwi-infrared
Isikrini seLCD, indlela yokudibanisa kunye nokuyisebenzisa kwi-alphanumeric. I-LCD1602 iyasetyenziswa
Ithemometha. Thermistor, potentiometer kunye neLCD ziyasetyenziswa
Lawula ii-LED ezisibhozo nge-74HC595, ke awunyanzelekanga ukuba usebenzise izikhonkwane ezi-8 ebhodini
Sebenzisa iliso elibukhali
I-74HC595 kunye nesahlulo sokubonisa ukubonisa iinombolo 0 - 9
Amacandelo ama-7 icandelo lokubonisa ulawulo
Ulawula njani imoto ye-DC enetransistor
Uyisebenzisa kanjani into ebuyiselayo
Ukulawulwa kwemoto ehamba phambili
Ulawulo lweemoto ezihamba kunye nolawulo olukude
Banekhithi ephezulu eneeprojekthi ezininzi ezinje ngeRadio Frequency kwaye basinika incwadana yasimahla
Ekugqibeleni yintoni? Ngaba kufanelekile?
Ndifumana ikiti iluncedo kumntu ongalaziyo eli hlabathi, ongenayo iprojekthi ethile engqondweni kodwa efuna qala ukuvavanya into enokwenziwa ngeArduino, kuba bakunika izivamvo ezaneleyo kunye namalungu ukuze kungafuneki ukuba ukhangele, uthenge, kwaye ulinde ukuba izinto zifike. Yindlela yokungabenzi nzima ubomi. Ngenye yezi khithi mzuzu wokufumana kwakho unokuhla uye emsebenzini kwaye zikwabiza kakhulu.
Ndiyabona ukuba iluncedo kakhulu ekusebenziseni kwimfundo. Ipakethi yabantwana abaya kuba nakho ukwenza iiprojekthi kunye nazo zonke iiyantlukwano ezenzeka kubo.
Ukuba ubukule nto ixesha elide kwaye unezinto ezisisiseko, andiziboni zinomdla, ngaphandle kokuba ufumana isithembiso kwaye ubone ukuba kubiza ixabiso eliphantsi kunokuthenga ezo ziqwenga uzifuna ngokwahlukeneyo, kodwa ayizukuqheleka .
Ekugqibeleni ndishiywe ngumnqweno wokubona ezinye iRaspberry Pi Kit kunye neerobhothi kunye neArduino zokuqalisa izixhobo ezivela kwezinye iimveliso.
Isisombululo: avrdude: ser_open (): ayinakho ukuvula isixhobo kwiArduino
Uyongeza njani i-watermark ngokukhawuleza kwaye ngobuninzi
Uyenza njani into yokubuyisela ixabiso leNylon ngexabiso eliphantsi ...
Isifo esikho elizweni jikelele. ICOVID-19 ishukumisa umhlaba
Yintoni iScratch kwaye yenzelwe ntoni?
V yeVendetta nguAlan Moore noDavid Lloyd
Kwidreyini yeefomsile zekofu
izigaba Arduino Ukuhamba kwetikiti
I-Barn Swallow (iHirundo rustica)
Izimvo ezi-7 kwi «Starter Kit ye ​​Arduino Super Starter Kit UNO R3 Project ngu Elegoo»
UJose Antonio Martinez
NgoSeptemba 10, 2018 kwi-6: 48 pm
Molo ekuseni mna noNacho sathenga imveliso enye njengawe kodwa andikwazi ukufunda isifundo ngeSpanish.Ndiyivula kwaye iphuma ngesiNgesi kwaye andazi ukuba kutheni.
unayo ukuba ungandinika intambo. Enkosi
NgoSeptemba 10, 2018 kwi-10: 18 pm
Molo uJosé Antonio.
Khuphela incwadana kwi http://www.elegoo.com/tutorial/Elegoo%20Super%20Starter%20Kit%20for%20UNO%20V1.0.2018.07.05.zip unzip kwaye kukho ifolda yeSpanish, enethala leencwadi, incwadi yesikhokelo kunye nekhowudi
Ukuba uneengxaki, ndixelele kwaye ndiza kubona ukuba ndingazithumela njani kuwe
EyoMqungu 21, 2019 ngo-2: 26 am
Sawubona Nacho, ndathenga ikiti efanayo. Kodwa andikwazi ukudibanisa umqhubi ukuze ibhaqe i-arduino uya kuba nephepha lokukhuphela umqhubi.
Enkosi. UMarco Polo
EyoMqungu 23, 2019 e 4:17 pm
Molo balapha https://www.elegoo.com/download/ , Cofa kwikhithi yakho kwaye ukhuphele i-zip kwaye ngaphakathi ngaphakathi
UTshazimpuzi 2, 2020 ngexesha 1:08 am
Molo ANDINAKHO UKUFUMANA IINCWADANA ZESIPANISHI, UNGABENZA KUM
EtiMnga 31, 2021 ngexesha 2:34 am
Molo, ngaba uyazi naziphi na izifundo ezilungileyo nezithembekileyo zeArduino ezinokuthi zenziwe kwi-Intanethi?
EyoMqungu 3, 2022 e 5:10 pm
Oku kugqibelele kakhulu ukuba ungumqali. Uyaqonda, ayisimahla. https://www.udemy.com/course/arduino-cero/
1 Izixhobo, izixhobo kunye nezivamvo ezifakwe kwikhithi
2 Uluhlu lweeprojekthi eziza kwenziwa neArduino abasinika zona kwizifundo zabo
3 Ekugqibeleni yintoni? Ngaba kufanelekile?